ब्लग - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
खबरदार ! नाच्ने बाहानामा नाङगीन पाइदैन, तिम्रो बैशले माग्या हो भने……….
नाच्ने बाहानामा तिम्रो त्यो बिग्रेको अंग प्रर्दशन नगर । कुरितीको हैन सँस्कृतीको रुप प्रर्दशन गर, यदि तिम्रो बैशले नै मागेको छ भने २ ४ जना भुसतिघ्रे संग सम्पर्क गर तर नेपाली समाजलाई तिरस्कार हुने यस्...
कसले गर्यो नेपाली साबुनहरुको बदनाम हुने गरी विज्ञापन ?
बिहिबार, माघ १३, २०७३
बिगत केही दिन देखी नेपालका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरुमा कतै तपाईले प्रयोग गरिरहेको नांगो साबुनमा बोसो त छैन ? आफुले प्रयोग गरेको साबुनमा के प्रयोग भईरहेको छ ? के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा पाउनु हरे...
म त बिहे गरेर दुलहालाई घरमा ल्याउने हो !
अझै पनि विवाहपछि घरपरिवारले दाइजो नल्याएको भन्दै महिलामाथि दुव्र्यवहार र कुटपिट हुने गरेको छ । माइतीबाट मोटरसाइकल, खेत र बाख्रा नदिएको भन्दै पतिद्वारा पत्नीलाई घर निकाला गरेको समाचार बारम्बार आइरहन्छ...
यस्तो होला भन्ने त मैले पनि सोचेकी थिइन । विश्वस्त थिएँ, म पनि तिमी जस्तै छुु । गल्ती सायद मेरै भयो । गल्ती भनँु कि कर्तब्य, तर हामी अलग्गिनु पर्छ भन्ने चाँही लागेकै थिएन । म बाहुन कि छोरी, तिमी नेवार...
किन अन्तरजातीय जोडीको हत्या गर्दैछ समाज ?
शनिबार, माघ ८, २०७३
के आफ्ना सन्तानको खुशी नै आमा बाबुको खुशी हैन र ? यो समाजमा बस्ने हाम्रा दाजुभाई तथा दिदी बहिनिको खुशी नै हामिले हाम्रो खुशी मान्नु पर्ने हैन र ? एउटै डोरीमा झुण्डिएर आत्महत्या गरे विचरा जोडिले । यो स...
स्ववियु निर्वाचनमा उमेर हद विवाद औचित्यहिन
बिहिबार, माघ ६, २०७३
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सीनेट बैठकले फागुण १४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगत केन्द्रीय क्याम्पससहित सम्पुर्ण क्याम्पसहरुमा स्ववियु निर्वाचनको मिति तय गरेसंगै अहिले विद्यार्थीहरुबीच आसन्न स्वविय...
बाबुरामले देखेको ओलीजम्
आइतवार, माघ २, २०७३
अहिले देश ओलीमय भयो भन्ने चिन्ताबाट तर्सिएर छट्पटिएका बिपक्षी दलका नेताहरुको आपत्कालिन चित्कार सुनिन थालेको छ । जसको उदाहरण स्वरुप डा. बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयम...
पृथ्वीनारायणलाई अपमान गर्नेहरुलाई मेरो सुझाव ‘शिरमा धोती लगा सरकार !’
पृथ्वीनारायण शाह नेपालको निर्माता जस्लार्इ व्याख्या बयान गर्नको लागी शब्दको अभाब छ, नेपाली शब्दकोषमा । एउटा झोले गवार देशद्रोहि मर्दा बिदा घोषणा गर्छ यो सरकार । तर रास्ट्रनायकको यत्रो योगदानलाइ कदर गर...
लोकमान कसरी योग्य थिए, जवाफ चाहियो खिलराज !
लोकमान सिंह कार्की अख्तियार जस्तो शक्तिशाली र पबित्र निकायको प्रमुख जस्तो गरिमापूर्ण पदमा नियुक्त हुन योग्य व्यक्ती होईनन भन्ने कुरा उन्लाई नियुक्त गर्ने काममा संलग्न ब्यक्तीहरुलाई थाहा नभएको कुरा...
अलिकती स्वार्थी भैदिए म पनि, सबै अनुहार डिलिट गरिदिए
त्रीपुरेस्वर टेकु कालीमटी कलन्की उसले एकै सासमा आफ्नो रूटबारे भट्याइरहेको थियो,रातभरि घोकेर कण्ठ पारे झै गरी । मैले हातले इशारा गरे गाडी रोक्नको लागि, ११-१२ बर्षको जस्तो देखिने त्यो फुच्चेले स्वार्‍र्...
छोरीले ढाका टोपी लगाउनुको अर्थ के हो ? किन लगाउनुपर्छ ?
ढाका टोपी छोरीहरुले लगाएर फेसबुकमा फोटो राखेकोमा केही इतिहासलाई सम्मान गर्न नसक्ने मूर्ख, अध्ययनहीनहरुले हेलाँ गरेर लेखे, उडाउन खोजे । लगाउनेहरुलाई पनि थाहा थिएन कतिलाई । तर, मैले २०५८ मै एउटा अनुसन्ध...
भ्रष्टाचारीहरू र राष्ट्रविरोधी टोपी लगाउने वर्ग कै छन
पुरुष ले लगाउने पहिरन महिलाई पटक्कै सुहाउंदैन । कतै तपाइँ श्रीमती, आमा, बहिनी, दिदी, फुपु आदिले तपाईंले जस्तो यो पुरुषको टोपी लगाएर जोकर त भई रहेका छैननु? फेरी हामी महिलाले गुन्यू चोली दिवस मनाए भने प...
स्ववियु निर्वाचन : समस्या र समाधान
फागुन १४ मा त्रि.बिले स्ववियु निर्वाचनको घोषणा गरेको कुरा धेरै संचार माध्यमबाट सुन्नमा आयो । तर बिभिन्न संघठनको आ-आफ्नो स्वार्थका कारण निर्धारित समयमै निर्वाचन हुने संभावना धेरै नै न्यून छ । ९ बर...
तिम्रा छोरी–चेलीले अरुको ‘बेड’ तताउँदा कसरी सत्य सावित्री ?
म जुन धरातलमा छु त्यसलाई मैले मेरो प्रगती नै मान्नुपर्छ । जीवन जिउने क्रममा धेरै उतारचढाब आउँछन । त्यसलाइ पन्छाउदै जीवन जिउन मैले मेरो बाबा, आमा, साथी भाइ, आफन्त तथा यहाँहरुबाटै सीकिरहेको छु । बाटो स...
संघियता : पिशावको सीमाङ्कन नवनोस् !
जिनेटिक संरचना हेर्ने हो भने मानिस र चिम्पान्जिमा ९६.५ समानता छ । मानिस र बिरालोमा ९०.५ छ भने मानिस र मुसामा ८५.५ समानता छ । यस्तै मानिस र गाईमा ८०.५ छ भने मानिस र अर्को मानिसमा ९९.९५ समानता भएको बैज्...
ब्राह्मणले छोएको कहिल्यै खान नपरोस !
मङ्लबार, पुस १२, २०७३
[caption id="attachment_1967" align="alignleft" width="150"] लेखक[/caption] म दलितले छोएको खान्छु । भोटे, सार्की, कामी, दमाई, पोडे, मगर सबैले छोएको खान्छु । तर याद होस, जो धर्मको नाममा पु...
नेपालपाटी टिप्पणीकर्ता दिवंगत सुशील कोईराला नेतृत्वको सरकारमा विमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए । उनले भारतीय कम्पनीले तयार पारेको काठ्माण्डौ—निजगढ द्रुत मार्गको प्रतिवेदन र वित्...
मधेसी हु, मधेशवादी हैन
मङ्लबार, पुस ५, २०७३
मलाई नेपाल भित्र अट्ने मधेश चाहिन्छ, छिमेकीको राजदुतावास भित्र रचिने मधेश हैन। मधेसी हु, मधेशवादी हैन,...भो अझै असल प्रतिनिधित्वको ढोंग नगर। - "संघियता नेपालको लागी बिकासको आधार हो" भन्दै संघियतामा ज...
लेखाइमा सुन्दर अक्षरको महत्व
मानिसले अन्तरमनको ज्ञानलाई जनमानस सम्म पुर्याउने दुई तरिका छन । एउटा बोली अथवा आवाजको माध्यमबाट र अर्को लेखाइको माध्यमबाट । मानिसको बोली वा आवाजमा जति स्पष्टता दिन सक्यो सुन्नेले उति सहज गरि सुन्ने तथ...
चन्द्रागिरीको डाँडामामा हुने ठगी र मेरो चासो
शनिबार, पुस २, २०७३
चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिको केबलकारमा यात्रा गर्ने मानिसहरु डाँडामा पुगेर कुन खाने कुरामा कति प्रतिशत बढी ठगिन्छन्, यो मेरो लागि कम चिन्ताको विषय हो। मेरो खास चासो चन्द्रागिरि हिल्सको एकाधिकारले देशले ...